Sina kely Portable efitrano fampangatsiahana rivotra mangatsiaka miaraka amina ranomandry Pack XK-05SY sy mpamatsy | XIKOO
XK-05SY efitrano kely azo entina etona misy etona mangatsiaka misy etona ranomandry
XIKOO XK-05SY efitrano fampangatsiahana rivotra mangatsiaka be mpitia dia malaza indrindra, mampihena ny mari-pana amin'ny alàlan'ny etona amin'ny rano. ary kely sy tsara tarehy izy, misy endri-javatra toy ny etsy ambany:
Vatan'ny plastika ABS Material vaovao, Anti-UV, Anti-fahanterana, fotoana lava iainana. loko fotsy + manga / fotsy, mitondra fahatsapana madio sy vaovao. Ny endrika ivelany dia natao ho malala-tanana sy marevaka ary tsara tarehy.
Fanjifana herinaratra ambany indrindra 0.15kW / h & onjam-peo 5000m3 / h mahery, manarona 20-30m2.
Telo lafiny kalitao 5090 # avo fahombiazana vokany mangatsiatsiaka kokoa tantely fanamainana tantely miaraka amin'ny sivana vovoka, miasa amin'ny toerana malalaka mba hitondra rivotra madio sy mangatsiaka ary madio ao anaty.
LCD tontonana fanaraha-maso porofo momba ny rano + fanaraha-maso lavitra, misy hafainganam-pandeha 3 hafa, famantaranandro 24ora mety, kodiarana iraisan'ny kalitao misy hidiny. Ary misy fiarovana mihoatra ny enta-mavesatra sy paompy, savily Auto hanarona faritra lehibe.
Faritra rakotra singa tokana 20-30m2
Fanaterana ny rivotra 5-8M
feo ≤55 db
Siniben-drano 30 L
Fanjifana rano 5-8 L / H
Lanja afa-karatsaka 16Kg
Loading Quantity 257 pcs/ 40HQ 100pcs / 20GP
Fidirana rano boky fampianarana
Fampiharana : Ny rivotra mangatsiaka XK-05SY dia misy ny fampangatsiahana, ny fanamasinana, ny fanamasinana, ny angovo mamonjy asa hafa, ary koa ny vokatry ny moana. Izy io dia be mpampiasa amin'ny trano, fivarotana birao ary toerana hafa.
Teo aloha: vy tsy misy fangarony vy lehibe indostrialy ooler XK-30/35/45 / 50S
Manaraka: Ny etona misy rivotra mangatsiaka azo entina any Shina dia manamboatra XK-06SY
rivotra mangatsiaka fonosana
Cooler amin'ny rivotra ao anaty
azo entina etona etona etona etona mangatsiaka rivotra ...